Ndiyo Yekupedzisira 10 Percent | Martech Zone
Muvhuro, Ndira 7, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Mumwedzi mishoma yapfuura, isu tanga tine gumi nemaviri kuburitswa kwekushanda nyowani mukushandisa kwedu uye nekubatanidzwa kwedu. Nehurombo, isu zvakare tine mashoma mapurojekiti akatangwa mazhinji, mwedzi yakawanda yadarika ndisati ndasvika ayo achiri asina kugadzirira kugadzirwa. Haisi mhosva yechikwata, asi ikozvino rave basa rangu kusvika mukugadzirwa.
Hapana mubvunzo kuti ndine timu chaiyo uye tekinoroji chaiyo. Asi 90% yebasa rakaitwa kwenguva yakareba.
Heano zano rekuti titore pamusoro pekupedzisira 10%:
Ita kuti vagadziri vako varatidze mashandiro acho.
Chikumbiro cheGwaro chinoshanduka nehukuru hwakadzama uye vanowana kugamuchirwa kubva kuchikwata kuti nei shanduko idzi dzichifanira kuitwa.
Wana chibvumirano chekuti shanduko dzichapedzwa riini.
Ronga kuratidzira kunotevera.
Enda padanho rekutanga.
Kana purojekiti ikanonoka, njodzi inowedzera zvekuti inozononoka zvakare. Mumabasa apfuura, ini ndainzwa kugomera kwekusununguka pakafa nguva yakatarwa… nekuti inotenga imwe nguva yekupedzisa. Vashandi vanogara vachida kuita basa rakakura uye vanogadzira kunyanya kuda kuratidza tarenda ravo.
Takanga tine demo vhiki kana kupfuura apfuura izvo zvisina kupfuura zvakanyanya. Vagadziri vakaratidza kunonoka, ivo vakatanga chikumbiro nemaoko nekushandisa kwavo (zvishoma zvekubira), uyezve kutengana kwacho kwakatadza. Payakatadza, paive nerunyararo. Uye kunyarara. Uye zvimwezve. Takataura nemimwe mhinduro dzichibva tavhara demo zvinehunhu.
Mushure mechiratidziro, ndakataura nemukuru wezvekusimudzira uye akandivimbisa kuti chirongwa ichi chapera 90%.
Ndakamutsanangurira kuti 90% zvinoreva 0% mukutengesa. 90% zvinoreva kuti zvibodzwa hazvina kuzadzikiswa. 90% zvinoreva kuti zvinotarisirwa zvakaiswa netarisiro uye vatengi havana kuzadzikiswa. Kunyange ini ndichibvuma kuti 90% ndiyo ruzhinji rwebasa, hakusi kubudirira kusvikira iyo yekupedzisira 10% yapera. Izvo zvinowedzera kusvika ku100% nenzira;).
Vhiki rino, takaona demo zvakare uye chaive chinhu cherunako. Isu tave kugadzira twekupedzisira chigadzirwa uye ndine chivimbo chekuti tichaburitsa mumavhiki anotevera kana tazvipira kune vatengi vedu. Ini ndinoita kuti zvikwata zvizive kukura kwebasa ravakaita uye nekukoshesa kwatinoita basa. Haisi homerun… izvo zvichave kana isu tagadzira kugadzirira asi mabhesheni akanyatso kutakurwa.
Mamwe mazano ekuwedzera:
Nguva dzose takabvumirana pane zvakatemwa.
Mushure mekuchinja kwese mune zvinodiwa, dzokororazve nguva yacho uye bvumirana zvakare.
Ronga kuratidzira nenguva yakawanda kuti timu igadzirire.
Gadza zvinotarisirwa pakuratidzira. Ita kuti timu izive kuti iwe unofara!
Isa timu munyararire iwe uchiziva kuti matambudziko anogona kumuka, iwe unongotarisira kuti havazo.
Iva unotsigira, usamirira kukundikana wobva warwisa.
Rumbidzai pamberi pevanhu, shoropodza muchivande.
Usadaro, chero mumamiriro api ezvinhu, shandisa kuratidzira semukana wekukurudzira nekunyara. Iwe unongokurudzira vako programmers kutsvaga basa!
Rangarira kuti yekupedzisira 10% ndiyo yakaoma kwazvo. Ndiyo yekupedzisira 10% inogadzira uye inoputsa bhizinesi. Kuronga, kugadzirira uye kuuraya pane yekupedzisira 10% kuchaita mutsauko wese.
Tags: affiliateaffiliate chirongwaHararekubatanidzwa bloggingDataFrank Daleindavhiyumadhiri emunoKushambadziraSherpakutsigira
Jan 8, 2008 pa 11: 08 AM
Great post. Ini ndinofungidzira urikutaura zvekupedzisira 10% ndiyo yakaoma.